कक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै कि,ड्निको दुइपटक अप्रेशन गरेका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रु’वा’उने कथा उनकै मुखबाट (हेर्नुस भिडियो सहित) – Ap Nepal
अहिले पछिलो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दुखदायी रहेको छ ।सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथाम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे । प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्थे । सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे ।
सन्तोशका बुबा नेपाल प्रहरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए ।जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र प्रवेश गरेका थिए तव उनको किड्नीमा स्टोन भयो । अर्थात उनको किड्निमा ४२ ओटा स्टोन भयो । त्यसपछि उनकोभअप्रेसन भयो । त्योबेलाको समयमा लगभग उनी छ महिना स्कुल जान पाएनन । जतिबेला उनी अस्पतालको बेडामा अफ्नै जीवनसङ्ग सङघर्स गरिरहेका थिए ।
Prevप्रेम दिवशकै दिन कन्चन पुगे कोमामा, दियो निभ्न लाग्यो भन्दै अनिशालाई निरूको यस्तो सन्देश (भिडियो सहित)
Nextघट्यो अण्डाको मूल्य , हेर्नुहोस् कतिमा झर्यो त ?
सुपरमार्केटमै चोरीमा रङ्गेहात’ पक्राउ परेकी महिलाद्धारा बुर्का उचालेर अ-श्लि,ल हर्कत [भि,डियो सहित]
रञ्जनालाई जेल सजाय भएपछि आमा पहिलो पटक मि,डियामा, यस्तो छ अब रञ्जनाको यो,जना -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आज बढ्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ..
सपनाले सम्मानित भए-पछी दे’वघाटमा पुगेर पनि यसरी बेवारिसे श’वको गरिन् अ,न्त्यष्टि (भिडियो हेर्नुस्)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (115436)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (66916)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (43781)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (35149)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (34475)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (30979)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (28115)
लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रु; दै यस्तो भने । शिशिरको मनैछुने स,न्देशले सबैलाई रुवा;यो (भिडियो हेर्नुस) (24523)
७० बर्षका श्रीमान २० बर्षीय श्रीमतीको जोडी टिक-टकमा यसरी रम्दै सिरियलमा खेल्न अफर(भिडियो सहित) (23567)
गायिका अन्जु पन्त र थिर वैवाहिक जीवनमा बाँधिए ! हेर्नुहोस भिडियो (22903)
बिहेअघि नै शा रीरिक सम्प,र्क भएर बच्चा बस्यो । केटीको अर्कैसँग बिहे भयो, ५ बर्षपछि बसमा भे, ट्दा यस्तो भयो (भि,डियो हेर्नुस)